यदि मैले खोप लगाएको छु भने, के म अझै भाइरस लिन सक्छु? - कोभिड - १ V भ्याक्सिन लिनुहोस्
यो चरणमा यो जान्न सम्भव छैन र हामी केवल समयको फाइदाको साथ फेला पार्नेछौं।
खोपहरूले लिनेहरू तपाईंले COVID-19 रोगबाट ग्रस्त हुने सम्भावनालाई कम गर्दछ। प्रत्येक खोप बिभिन्न देशहरूमा २०,००० भन्दा बढी व्यक्तिमा परीक्षण गरिएको छ र सुरक्षित रहेको देखाइएको छ।
यो तपाईंको शरीरलाई खोपको पहिलो खुराकबाट केही सुरक्षा लिनको लागि एक वा दुई हप्ता लाग्न सक्छ।
सबै औषधिहरू जस्तै कुनै पनि खोप १००१TP१ टी प्रभावकारी हुँदैन, त्यसैले संक्रमणबाट बच्न तपाईंले सिफारिश गर्नु पर्ने सावधानी अपनाउनु पर्छ।
केही व्यक्ति खोप भए पनि COVID-19 पाउन सक्छन्, तर लक्षणहरू कम गम्भीर हुनुपर्दछ।
व्यक्तिगत मुद्दाबाट प्रारम्भिक प्रमाणहरूले सुझाव दियो यो सम्भव छ COVID-19 एक पटक भन्दा बढि विकसित गर्न। वैज्ञानिकहरू अझै पक्का छैनन् कि किन यस्तो हुन्छ; सैद्धान्तिक रूपमा, जब हामी बिरामी हुन्छौं, हाम्रो प्रतिरक्षा कोषहरूले एन्टिबडी प्रतिरक्षा निर्माण गर्नुपर्दछ जुन भविष्यमा हुने संक्रमणहरूको छिटो समाधान गर्न तयार हुनेछ। यो COVID-19 अधिक मौसमी भाइरस जस्तै छ, चिसो वा फ्लू जस्तै हुन सक्छ, जसको लागि हामी दीर्घकालीन प्रतिरक्षा कायम राख्दैनौं। त्यो अवस्थामा, महामारी फिर्ता पिट र राखन यो टाढा दोहोर खोप आवश्यकता छ।
चिसो र फ्लू भाइरस पनि वर्षौं बर्ष उल्लेखनीय परिवर्तन गर्दछ, त्यसैले किन हामीलाई वाषिर्क फ्लू शटहरू चाहिन्छ; त्यहाँ भाइरसको लागी कुनै खोप छैन जुन साधारण चिसो पर्ने गर्दछ। त्यो अवस्थामा, हामीले COVID-19 खोप पुन: डिजाइन गर्नु पर्ने हुन्छ हामी यसलाई फेरि लिनु अघि।
तर तथ्य यो छ कि यस प्रश्नको उत्तर कसैलाई पनि थाहा छैन। वैज्ञानिकहरूले निश्चित जानकारीको लागि निरन्तर भ्याक्सिन डाटाबाट जानकारी स collecting्कलन गर्नै पर्छ।
← यदि मसँग पहिले नै COVID-19 छ भने, के मैले खोप लिन आवश्यक छ, र के यो सुरक्षित छ? COVID-१ vacc खोप बेलायतमा कचकच छ →